I-Wholesale Catering Carta In - Palermo
Kuvaliwe: NgoMgqibelo ntambama - ngeSonto
Konke okudingayo ngebhizinisi lakho
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-17)
Ikhadi Lingenile e-Via Alias ​​2 / F a Palermo uthengiselaUkupakisha okuningana for the Isidlo, woza ukupakisha di Iphepha Lokudla.ngisho namaholide.
I-Wholesale Catering Carta In ePalermo - Izinto ezingalahlwa
Ikhadi Lingenile yebo a Isitolo esithe xaxa for the Isidlo kodwa lapha ungathenga, ngokungezelela kulabo abasebenza ezitolo zokudla, imigoqo, i-catering kanye nase- Isidlo, ngisho nalabo abanemisebenzi emiphakathini, imigoqo yewayini, izikhungo zezokwelapha futhi abakhonza izinto zikaKhisimusi nemikhiqizo yokuhlanza yonke inhlobo. Kungani unqunyelwe kuwe ukupakisha for the Isidlo e ukupakisha di Ikhadi Lokudla, lapho lokhuIsitolo esithe xaxa for the Isidlo Ingabe unawo amagilavu, amajazi welebhu, izigqoko zabapheki namamaski wokulahlwa? Ukukhetha okubanzi kwemikhiqizo kutholakala kuphela ku-Iphepha le-Catering le-Wholesale ukuhlangabezana nezidingo zawo wonke umuntu.
I-Wholesale Catering Carta In ePalermo - Ukupheka
Ikhadi Lingenile ise-Via Alias ​​a Palermo un Isitolo esithe xaxa for the Isidlo kugcinwe. Imikhiqizo ayinikezayo ingekhwalithi futhi iyathengwa koyedwa Isitolo esithe xaxa for the Isidlo ngokuqinisekile longa njengoba amasheya engakaze anele! I-Wholesale Catering Carta In eP Palermo uthengisa ukupakishwa kwamaphepha okudla, amakhandlela, obhasikidi, imishini yokuthambisa i-gastronomy, imigqomo kadoti, amabhokisi emigoqo yewayini kanye ukupakisha di Incwadi ngokudla uma kwenzeka. Uma ucishe wenza ngomsebenzi wakho, faka i-refuel ngokusheshaIsitolo esithe xaxa for the Isidlo.
I-Wholesale Catering Carta In ePalermo - Supplies for shop
Ikhadi Lingenile yisisombululo esifanele kulabo abafuna ukuhambisa ibhizinisi labo lephepha lokudla ngamanani ashibhile. L 'Isitolo esithe xaxa ngayinye Isidlo empeleni, nguyena kuphela onikela ngezinto ezisezingeni eliphansi ezitolo, Isidlo, imiphakathi, i-catering, izitolo zewayini, izikhungo zezokwelapha, bese kuba yizinto zikaKhisimusi kanye ukupakisha di Iphepha Lokudla. Musa ukulinda lokho okudinga ukwenziwa, a Palermo e 'Iphepha le-Catering le-Wholesale kuhlale kubonakala ngathi kuyathengiswa, ngisho nangaphezulu. Khetha a Isitolo esithe xaxa for the Isidlo okufana nokuthenga kwakho. Iya ku-Iphepha le-Catering le-Wholesale.
I-Wholesale Catering Carta In ePalermo - Isitolo esithe xaxa
TheIphepha le-Catering le-Wholesale e-Via Alias ​​2 / F a Palermo ngokukhethekile ukuthengisa ukuzeUkupakisha Ukudla Kwamaphepha ngu-shopper we Incwadi. nell 'Iphepha le-Catering le-Wholesale uthola ngokoqobo konke okudingayo a Isitolo esithe xaxa for the Isidlo ungaba, kufaka phakathi ukupakisha di Incwadi nezikhwama zemfucumfucu, ngaphezu kwalezo ezithengwa kumakhasimende ezitolo zokudla ngokwesibonelo. Ngaphezu kwalokho, Ikhadi Lingenile kubuye kuthengiswe ngezinto eziningi zamaqembu nasekhaya! A Isitolo esithe xaxa for the Isidlo ungayithola kusuka kuma-degrees angama-360 I-Carta In ePalermo.
Ikheli: Nge-Alias, 2 / F
Ucingo: 091 6859600
Yefeksi: 091 202092
Iwebhusayithi: www.cartain ingrosso.trovaweb.net
Ngincoma kuwo wonke umuntu inani elihle kakhulu lemali abasebenzi abayithandayo futhi bayasiza futhi uzothola konke okudingayo.